FAQ | Mihaona ny mpitovo Kristiana | Grace Singles tokana
INONA NO ATON'NY MPIKAMBAN'NY FINOANA SY FOMBA AZY
Raha vao misoratra anarana, raisina ho vahiny ianao. Ny vahiny dia afaka mamorona profil ary mankafy ny maha-mpikambana ny Fitsapana izay misy ny Fikarohana sy ny fijerena ny mombamomba fa ny Chat, ny mailaka ary ny mampakatra horonan-tsary dia mitaky famandrihana. Ary koa, tsy misy fahataperana amin'ny maha-mpikambana ny fitsapana.
ZAVA-DEHIBE: Ny Username izay nofidinao dia tsy azo ovaina. Mahaiza mamorona ary misafidy hendry!
INONA INDRINDRA NY Drafitra maha-mpikambana sy ny vidiny?
Misy drafitra efatra hisafidianana ary azo vidiana amin'ny alàlan'ny tabilao Upgrade Account eo ambanin'ny setting:
Mpikambana fitsapana afaka mamorona Profile, mampakatra sary sy horonan-tsary fa tsy afaka Message, Chat na mampiasa Forums.
Mpikambana Premium manana fidirana amin'ireto endri-javatra manaraka ireto na inona na inona drafitra nofidiny:
Alefaso / ekeo ny fangatahana sakaiza
Antso Audio / Video
Function Search (Basic, Advanced, Zip Code, Distance)
MISY MENUS ROA… AO AMIN'NY LOGIN'NY Havia sy Havanana aorian'ny logo:
Pejy fandraisana - Ilay faritra nitarihana anao rehefa niditra voalohany…
Amin'ny lafiny ankavia eo ambaniny dia ...
Misy bara menio eto ambany ny sarin'ny mombamomba ny mpampiasa izay manambatra ny be mpampiasa indrindra…
… Ary eo ankavanana ambony amin'ny Dropdown…
Ny mpikambana iray dia afaka mampiditra ilay Mpampiasa ho "Namana" amin'ny fipihana .
… Ary “Araho” amin'ny fipihana .
Eo amin'ny pejy fandraisana dia boaty iray hanavaozana ny satanao:
The endri-javatra dia mamela anao hizara ny fanananao an-tserasera, rohy, sary, eritreritra ary fampahalalana hafa. Toy ny fanavaozana ny satan'ny Facebook io.
Ny satananao dia hampiseho ny maha-mpikambana anao rehefa miditra ianao:
Hanova ny mombamomba anao - mamela anao hanova ny mombamomba anao ity ary mampakatra sary misy anao. Ny sary mombamomba anao dia takiana. TSY AZO ATAO MBOLA MIALA AMIN'IZAO DALANA IZAO! Ny fitifirana mialoha ny tavanao dia tsy maintsy atao. Ny zavatra, ny endri-tsoratra, ny biby, ny voninkazo, ny toerana na meme na inona na inona karazana dia TSY AZO raisina ho toy ny sarina mombamomba. Tandremo azafady fa HOSOKAINA na HAPATRA ny kaontinao raha tsy mankatò ianao. Raha tsy manana sary mahafinaritra anao ianao dia makà iray na asaivo misy olona manao izany ho anao! Aza adino ny mitsiky!
Ny fanontaniana midina sy safidy safidy rehetra dia tsy maintsy fenoina afa-tsy ny kaody sy ny kaody zip ao amin'ny mombamomba anao. Ny fanomezana ny tanànanao sy ny kaodim-paositra dia hahafahan'ny mpikambana mahita anao amin'ny karoka. Raha tsy te hizara ity fampahalalana ity ianao dia tadidio fa tsy ho hitan'ireo mpampiasa mijery ny faritra misy anao ianao.
Ny fanontaniana rehetra momba ny “essay” momba ny Profile dia tsy maintsy valiana ihany koa!
Amboary ny toerana misy anao - Tena zava-dehibe izany rehefa feno ny mombamomba anao. Ity takelaka ity dia hita eo ambanin'ny Edit Profile.
Hijery ny sarin'ny mpikambana hafa ..
… Tsindrio ao amin'ny Menu eto ambany ny mombamomba ny mpikambana:
INONA INDRINDRA NY CONNECTIONS?
Io dia ahafahan'ny Mpikambana mifampiresaka sy mifantoka amin'ireo olona tian'izy ireo indrindra.
INONA NO HAFATRA?
Eo amin'ny zorony ambony havanana dia ho hitanao ...
INONA NO LAZAINA?
Ity dia mampahafantatra ny mpikambana amin'ny hetsika rehetra ifandraisan'izy ireo toy ny Chat, Messages, Forums, sns.
INONA NO DIKAN'NY "PUBLIKA" AO AMIN'NY FITSIPIKA FA IZA NO MAHITA ASA ??
"Public" no olon-drehetra fa ny "Private" ihany .
INONA NO ATAO TADIAVIANA ary ahoana no fomba fiasan'izany?
Fikarohana fototra - Ireo mpikambana dia azo jerena miaraka amin'ny Username. Ity no fikarohana tokana ahafahana manao izany.
Fikarohana lalindalina - Hitarina ny asan'ny fikarohana amin'ny alàlan'ny fikarohana zavatra manokana amin'ny mombamomba anao. Ataovy ao an-tsaina fa rehefa mampiasa an'ity endri-javatra ity ianao dia tsy afaka misafidy safidy maromaro isaky ny sokajy sy safidy manerana ireo sokajy.
Ohatra, azonao atao ny mifidy hitady mpampiasa mitady "Fampiasana saina" na "Firaisana mety" na "fianakaviana mifangaro". Toy izany no fiasan'ny fikarohana amin'ny safidy rehetra ao anatin'ny sokajy.
Toy ny fahendrena raha mikaroka amin'ny sokajy rehetra ianao, ny motera fikarohana dia manao izao manaraka izao: Mitady ny "Fikarohana ny fanambadiana" ARY ny toetoetran'ny fanambadiana dia "mpitovo - tsy nanambady mihitsy". Toy izany no fiasan'ny fikarohana amin'ny sokajy ACROSS voafantina.
Azonao atao ny manambatra ireto mba hikarohana safidy maro ao anaty sokajy sy ireo fisafidianana manerana ny sokajy:
Ohatra: Ny fitadiavana dia "Mieritreritra ny fanambadiana" NA "Fitiavana mety" ary ny toetoetran'ny fanambadiana dia "mpitovo - tsy manambady mihitsy"
Fikarohana kaody zip - Mikaroha profil avy amin'ny kilaometatra maro avy amin'ny kaody zip nomena.
Fikarohana elanelana - Mitadiava mpikambana izay mampiasa kilometatra na kilometatra.
Search Me Near - Mpikambana hita ao amin'ny faritra misy anao.
Fikarohana voatahiry - Tehirizo amin'ny anaranao ny fikarohana ataonao mba hahafahanao miditra haingana amin'izy ireo.
INONA NO FITONDRANA Kaonty?
Izany dia ahafahan'ny mpikambana mifehy ireo safidy ireo…
Kaonty - ovao eto ny adiresy mailakao sy ny teny miafinao.
Voabahana - Ireto misy mombamomba izay nosakananao tsy hifandray aminao. Azonao atao ny manakana ny mpampiasa iray amin'ny mombamomba azy ireo ary mitatitra azy ireo koa.
Tsiambaratelo - Eo no ametrahanao izay afaka mifandray aminao.
ZAVA-DEHIBE: Zahao ny fahazoan-dàlana hifandraisanao amin'ny farany ambanin'ny pejy momba ny fiainana manokana. Hamarino tsara fa voamarina izy ireo. Izany dia hiantoka anao mandray hafatra manokana avy amin'ny lahy sy ny vavy voalaza.
Kaonty fanatsarana - Amboary ny kaontinao amin'ny maha-mpikambana anao premium mba hidiranao amin'ireo endri-javatra toy ny Hafatra sy Chat. Azonao atao ihany koa ny manivana ireo valiny ireo.
INONA NO INDRASA MANASA?
Io dia ahafahan'ny mpikambana mandefa fanasana mailaka natokana ho an'ny tsy mpikambana hanatevin-daharana ny SovereignGraceSingles.com…